Wararka - Sida loo rakibo baraha cadceedda waddooyinka
Shaqooyinka iyo meelaha isticmaalka baraha qorraxda ee waddooyinka ayaa kala duwan. Ku rakibidda baraha cadceedda waddada waxay u baahan tahay tallaabooyinka diyaarinta ee soo socda.
Marka hore, u diyaari qalab lagu rakibo baraha qorraxda waddooyinka. Aaladaha loo baahan yahay si loo rakibo baraha jidadka qoraxda waa: qiyaasta giraangirta iyo sumadeeyaha, daloolinta asaasiga ah, daloolinta asaasiga ah, daloolinta korontada ama dubbe iyo mishiinka, nadiifiyaha faaruq-qoyan iyo qalalan, hagaajin, khamri cad iyo maro aan madmadow lahayn, xabagta, jaakada muuqaalka sare leh iyo surwaal, kabaha nabdoonaanta, gacmo -gashiga, muraayadaha indhaha/muraayadaha badbaadada, ilaalada dhegaha, iwm.
Marka labaad, waa in la sameeyaa qalab badbaado oo dhammaystiran si loo ilaaliyo nabadgelyada rakibayaasha barafka cadceedda. Marka la rakibayo baraha cadceeda ku shaqeeya, ma aha oo kaliya in si ku meel gaar ah loo xiro waddada, laakiin sidoo kale in agagaarka waddada lagu rakibo qalab digniin ah si looga hortago in baabuurtu soo galaan. Rakibayaasha baraha cadceedda ee waddooyinka waxay u baahan yihiin inay xidhaan jaakado milicsanaya si ay u xusuusiyaan baabuurta.
Kuwani waa diyaargarowga rakibidda baraha waddooyinka ee la socon karo. Ka dib marka hawlahan la dhammaystiro, waxaan si dhab ah u rakibi karnaa baraha cadceedda ee waddooyinka sida waafaqsan sawirrada.
1. Geesaha indhoolayaasha ah ee halista ah iyo qalooca fiiqan, dhibco madow iyo meelaha iftiinka liita.
2. Aagaga oo leh xaalado cimilo oo aan la saadaalin karin (waddooyinka xeebaha, meelaha ceeryaanta leh, meelaha qoyan iyo roobabka iwm).
3. Isgoysyada wadajirka ah, kor iyo hoos u leexashada, khadadka dhexe iyo khadadka kala qaybiya.
4. Digniinaha gelitaanka, haadka toosan, buundooyinka, qalooca,
Isgoysyada iyo waddooyinka dhinaceeda 5. WISTRON baraha cadceedda ee aadka u khafiifka ah ayaa lagu rakibi karaa waddooyinka baaskiilka iyo waddooyinka dhinaceeda.
6. Goobaha madadaalada, meelaha baabuurta la dhigto, meelaha laga soo galo hoteelka iyo kaalmaha shidaalka, iwm.
. 7. Khadadka tilmaamaha, calaamadaha gaadiidka, wareegyada iyo waddooyinka buuraha.
Waqtiga dhejinta: May-27-2021